बिओकेको ब्लू चिप्सको विल्ला कता हरायो ? फोर्स मर्जको विरुद्धमा लगानीकर्ता - Aarthiknews
बिओकेको ब्लू चिप्सको विल्ला कता हरायो ? फोर्स मर्जको विरुद्धमा लगानीकर्ता
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके)को २५ औं वार्षिक साधारणसभामा शेयरधनीहरुले एक समय शेयर बजारमा ब्लू चिप्सका रुपमा रहेको बैंक ब्लू चिप्सको छेउमा पनि नपुगेको गुनासो गरेका छन् । बैंकको साधारणसभा सबै सञ्चालक सहभागी नभएको प्रति लगानीकर्ताहरुले गुनासो गरेका थिए । साधारणसभामा बोल्ने अधिकांश शेयरधनीहरुले बैंकका सबै सञ्चालक एकमत भएर साधारणसभा नगरेको प्रति शंका व्याख्त गरेका थिए । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जर लगानीकर्ताको हितमा नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पुँजी वृद्धि योजनाले यस अगाडि पनि शेयर बजारमा त्यसैको असर अझै रहेको भन्दै उनीहरुले फोर्स मर्जरको विरुद्धमा उत्रिने समेत चेतावनी समेत दिएका छन । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभन देव पन्तले शेयरधनीको प्रश्नमा जवाफ दिँदै भने, ‘फोर्स मर्जरको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको हरेक निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु पर्छ तर, मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापन एकदमै जटिल छ ।’ उनले बिओकेले पहिले नै लुम्बिनी बैंकसँग मर्ज गरिसकेको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको जस्तो विवाह नै गर्ने भने पनि अब अर्कोसँग विवाह गर्न नेपालको कानूनले दिँदैन होला ।
बैंकको साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ११ प्रतिशत नगद लाभांश र ६ प्रतिशत बोनस शेयर पारित गरेको छ । शेयरधनीहरुले बैंकका लगानीकर्ताहरुको शेयरमा देखिएको सानो सानो युनिटलाई समेत बैंकले समायोजन गरेर लगानीकर्तालाई राहत दिन आग्रह गरेका थिए ।